Hosia 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
9 “Izrel, aṅụrịla ọṅụ.+ Enwela aṅụrị dị ka ndị dị iche iche.+ N’ihi na ịkwa iko emewo ka i si n’akụkụ Chineke gị pụọ.+ Ụgwọ a na-akwụ gị n’ebe niile a na-azọcha ọka* masịrị gị.+ 2 Ebe nzọcha mkpụrụ na ebe nzọchapụta mmanya adịghị emepụtara ha ihe,+ mmanya ya dị ụtọ agakwaghị adị.+ 3 Ha agaghị ebi n’ala Jehova,+ Ifrem ga-alaghachi Ijipt,+ ha ga-erikwa ihe na-adịghị ọcha n’Asiria.+ 4 Ha agaghị anọgide na-awụpụrụ Jehova mmanya.+ Àjà ha agakwaghị atọ ya ụtọ;+ ọ dị ka nri a na-eri n’oge iru uju+ nye ha; ndị niile na-eri ya ga-emerụ onwe ha. N’ihi na nri ha bụ maka mkpụrụ obi ha; ọ gaghị abata n’ụlọ Jehova.+ 5 Olee ihe unu ga-eme n’ụbọchị nzute nakwa n’ụbọchị ememme Jehova?+ 6 N’ihi na, lee! ha ga-ala n’ihi na e bibiwo ya.+ Ijipt ga-achịkọta ha ọnụ;+ Memfis+ ga-eli ha. Ahịhịa akụwa ga-eweghara ihe ha+ a na-achọsi ike, bụ́ ndị e ji ọlaọcha mee; ọhịa ogwu ga-ejupụta n’ụlọikwuu ha.+ 7 “Ụbọchị a ga-elebara ha anya ga-abịa;+ ụbọchị a ga-akwụ ha ụgwọ kwesịrị ha ga-abịa.+ Ndị Izrel ga-amata ihe na-emenụ.+ Onye amụma ga-aghọ onye nzuzu,+ ọtụtụ njehie gị+ na ibu iro nke juru ebe niile ga-eme ka ara gbaa onye mmụọ na-akpali ikwu okwu.” 8 Onye nche+ Ifrem dịnyeere Chineke m.+ Ọnyà onye na-achụ nta nnụnụ jupụtara n’ụzọ niile+ nke onye amụma;+ ibu iro dị n’ụlọ Chineke ya. 9 Ha emikpuwo onwe ha n’iweta mbibi,+ dị ka e mere n’ụbọchị Gibia.+ Ọ ga-echeta njehie ha;+ ọ ga-elebara mmehie ha anya. 10 “Ahụrụ m Izrel dị ka mkpụrụ vaịn dị n’ala ịkpa.+ Ahụrụ m ndị nna nna unu dị ka mkpụrụ mbụ osisi fig mịrị na nke mbụ ya.+ Ha bakwuuru Bel nke Piọ,+ ha wee rara onwe ha nye ihe ihere,+ ha wee ghọọ ndị rụrụ arụ dị nnọọ ka ihe ahụ nke ha hụrụ n’anya.+ 11 Ebube Ifrem ga-efepụ dị ka anụ ufe,+ nke ga-eme ka a ghara ịmụ nwa, gharakwa ibu afọ ime na ịtụrụ ime.+ 12 N’ihi na, ọ bụ ezie na ha na-azụ ụmụ, m ga-agbawa ha aka ụmụ, nke ga-eme ka nwoke ghara ịfọdụ.+ Ahụhụ ga-adịrị ha mgbe m ga-ahapụ ha!+ 13 Ifrem, bụ́ onye a kụrụ n’ala ịta ahịhịa,+ yiri Taya n’anya m, ee, a kawo ya aka na Ifrem ga-akpọpụta ụmụ ya kpọnye onye ga-egbu ha.”+ 14 Jehova, nye ha ihe ị chọrọ inye ha.+ Nye ha afọ na-ekwo ime+ na ara tara mmiri. 15 “Ihe ọjọọ ha niile dị na Gilgal,+ n’ihi na ọ bụ n’ebe ahụ ka m nọ kpọ ha asị.+ M ga-achụpụ ha n’ụlọ m+ n’ihi ajọ omume ha. Agaghị m anọgide na-ahụ ha n’anya.+ Ndị isi ha niile na-eme isi ike.+ 16 A ga-etikpọ Ifrem.+ Mgbọrọgwụ ha ga-akpọ nkụ.+ Ha agaghị amị mkpụrụ ọ bụla.+ Ọ bụrụkwa na ha amụọ ụmụ, m ga-egbu ihe a na-achọsi ike ndị si n’afọ ha.”+ 17 Chineke m+ ga-ajụ ha, n’ihi na ha egeghị ya ntị,+ ha ga-aghọ ndị gbara ọsọ ndụ n’etiti mba dị iche iche.+